Qaar Kamid Ah Madaxda Kooxda Inter Milan Oo Laga Baaray Covid19.
Home Horyaalka Italy Qaar kamid ah madaxda kooxda inter milan oo laga baaray Covid19.
Inter waxay xaqiijisay in shan xubnood oo shaqaale ah ay ka heleen cudurka loo yaqaan ‘coronavirus’ Maamulayaasha Alessandro Antonello iyo Giuseppe Marotta, agaasimaha isboortiga Piero Ausilio iyo qareenka Angelo Capellini ayaa dhamaantood soo celiyay tijaabooyin aan wanaagsanee.
Xubin aan la cayimin oo ka mid ah shaqaalaha farsamada ee Serie A ayaa sidoo kale tijaabiyey cudurka loo yaqaan ‘COVID-19’ Bayaan ku saabsan websaydhka rasmiga ah ee Inter ayaa akhriyay: “Dhammaan tababarayaasha iyo kooxda oo dhami waxay raaci doonaan habraacyada lagu qeexay borotokoolka caafimaadka.
Inter ayaa ka quusan doonta inay hubiso in faafitaankani uusan ku fidin kooxdooda koowaad ama tababarayaasha Kooxda reer Talyaani ayaa hogaanka sii dheereysatay kulankii ugu dambeeyey waxa ay 3-0 kaga badiyeen kooxda ay xafiiltamaan ee Milan markii ugu dambeysay.
Iyada oo aan lahayn ballanqaadyo Yurub ah inta ka hartay xilli ciyaareedka xidigaha Antonio Conte ayaa ah kuwa ugu cadcad inay soo afjaraan muddo 11 sano ah oo horyaal la,aan ah Markii ugu dambeysay ay qaadeen waxa ay aheeyd xilligii uu Jose Mourinho joogay kooxda sanadkii 2010, taasoo sidoo kale ku guuleysteen champions league.
Juventus, oo ku guuleysatay sagaalkii koob ee ugu dambeysay Serie A, ayaa sideed dhibcood dib ugu soo laabatay kaalinta seddexaad iyadoo gacanta ugu jirta Inter ayaa Axadda wajahayamsa kooxda Genoa ciyaar ka dhici doonto San Siro.
Previous articleDouglas Costa oo Jecel inuu ku laabto horyaalka Talyaaniga.
Next articleNatiijooyinka Kulamada Europe League, Arsenal oo guul gaartay iyo Manchester United oo bar-baro lagu qabtay